CIN Khabar बाल मनोविज्ञानमा पारेको प्रभाव धर्मगुरुमार्फत न्यूनिकरण बारे छलफल
सीआईएन बिहिबार, वैशाख ३०, २०७८, ०१:५१:००
काठमाडौँ । कोभिड १९ को दोस्रो लहरले बाल मनोविज्ञानमा पारेको प्रभाव न्यूनिकरणका लागि ार्मिक गुरुहरूको भूमिका विषयक छलफल कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।
वर्ल्डभिजन इन्टरनेशनल नेपाल, निरन नेपाल, अकोराब र सीआईएनको सहकार्यमा भरच्युल माध्यमबाट भएको कार्यक्रममा बिभिन्न धर्मका धार्मिक गुरु तथा अगुवाहरू, बालबालिका र बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्ने संघसंस्थाका प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको थियो ।
कार्यक्रममा धर्मगुरूहरूले कोभिड १९ ले बाल मानोबिज्ञानमा त्रास फैलिएको र विद्यालय बन्द हुँदा अन्योलता बढेकाले यस्तो बेलामा बिद्यार्थीहरूले आध्यात्मिक ज्ञान र अनुशासनका कुराहरू सिक्न सक्ने बताए ।
मानिसहरू भेलाहुने सबै प्रकारका धार्मिक कार्य स्थगित गरी आफू बच्ने र अरुलाई पनि बचाउने कार्यमा लाग्न आफ्नो समुदायलाई उत्प्रेरित गर्ने प्रतिबद्धता धर्मगुरुहरूले व्यक्त गरेका छन् । समुदाय र बालबालिकामा कोरोनले पारेको प्रभाव न्यूनिकरणका लागि बालबालिकालाई परामर्श दिने प्रतिवद्धता पनि उनीहरूले व्यक्त गरेका छन् ।
रमजान र ईदको पूर्वसन्ध्यामा गरिएको कार्यक्रममा नेपालमा रहेको प्राय सबै धर्मका धर्मगुरुहरूले शुभकामना आदानप्रदान गर्दै सबै धर्मबीच धार्मिक सद्भाव कायम गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।
कार्यक्रममा स्लामिक संघका पूर्व अध्यक्ष नजरुल हुसनले ईदका अवसरमा कहिँ पनि भेला र सामूहिक पाठ नहुने बताउनुभयो ।
निरन नेपालका अध्यक्ष हर्स थापाले अहिले विद्यालय बन्द भएको बेलामा बिद्यार्थीहरूले आध्यात्मक ज्ञान, व्यावहारिक ज्ञान र अनुशासनका कुरा घरमै बसेर सिक्नसक्ने बताउनुभयो ।
विद्यार्थी जेनिसा चौधरीले आफू जस्ता सानो उमेरका व्यक्तिलाई परिवारबाट पढ्ने मात्रै दवाव आएकोले चिन्ता भएको बताउनुभयो ।
उहाँले बन्दाबन्दीको बेलामा विगतमा जस्तै यस पटक पनि बालविवाह नहोस् भन्दै त्यसलाई रोक्ने जिम्मा सबै धर्मका अगुवाले लिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
बाही धर्मका अगुवा डा. नरेन्द्र पाण्डेले यस्तो बेलामा रेडियो जस्तो सञ्चारमाध्यमले सकारात्मक खवर दिएर नागरिकलाई त्रासमुक्त बनाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
आसोधाराका आचार्य डा. नम्रता पाण्डेले यस्तो समयमा बालबालिकालाई कलाकारिता र सकारात्मक कुराहरु मात्रै सिकाउनु पर्ने बताउनु भयो ।
विश्व जागरण अभियानका संरक्षक श्वामी विनोद शर्माले आफूले बालबालिकाका लागि उत्प्रेरणा दिने कार्यक्रम र प्रवचन निरन्तर गरेको बताउदै अन्य धर्मगुरुहरूलाई पनि बालबालिकाको परामर्शका लागि धेरै समय छुट्याउन आग्रह गर्नुभयो ।
अखिल भिक्षु महासंघका उपाध्यक्ष धर्ममूर्तिले आफूहरूले यो समयमा सबैमा सेवाभाव बिकास गर्नको लागि उत्प्रेरणा दिइरहेको बताउनुभयो । स्लामिक संघका महासचिव अबुल कलाम मियाले बालबालिकालाई यस्तो बेलामा सामाजिक सञ्जालहरुबाट बचाउनु पर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले स्लाम धर्मले बालबालिकालाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने निर्देश गरेकाले आफूहरू बालबालिकामाथि हुने हिंसाको अन्त्यमा लागेको बताउनुभयो ।
सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघका अध्यक्ष अर्जुन गिरीले धार्मिक अगुवाहरुको माध्यमबाट समाजिक रुपान्तरण अभियान गरेमा त्यो सफल हुने बताउनुभयो ।
इसाई धर्मका अगुवा इसुजंग कार्कीले बालबालिकालाई घरको काम र जीवन व्यबहार सिकाउन सबै अबिभाबकलाई आग्रह गर्नुभयो ।
प्रकाशित मिति: बिहिबार, वैशाख ३०, २०७८, ०१:५१:००